Amagesi Emakati: Izimbangela Nezixazululo | Amakati kaNoti
UMaria Jose Roldan | | Izifo, Tricks
I-Los igesi emakati Imvamisa ziyinkinga esingaziniki ukubaluleka okukhulu kuze kuqale ukuthi zinuke kakhulu. Imvamisa ziyingxenye yemvelo yenqubo yokugaya ukudla, kepha lapho kwenzeka ezinye izimpawu, impilo yoboya kungenzeka iqale ukudinga ukunakwa.
Ake sibheke yini izimbangela, izimpawu nezisombululo zamagesi emakati.
1 Izimbangela zegesi emakati
2 Izimpawu zegesi emakati
3 Amakhambi asekhaya egesi emakati
3.1 Gwema ukunikeza ubisi
3.2 Mnike ukudla okungekho fiber kanye namabele
4 Izindlela eziningi zokwelapha igesi emakati
5 Ingabe inkinga yezempilo?
6 Uzoya nini kudokotela wezilwane?
Izimbangela zegesi emakati
Amagesi amaningi avela ekudleni komoya, ngakho-ke enye yezimbangela ezinkulu ukuthi ikati udle ngokushesha okukhulukungaba ngoba encintisana nelinye ikati ukulithola noma ukulifunela ukucindezeleka (imininingwane eminingi lapha). Esinye isizathu ukuthi uqale ukudla ngemuva nje kokugijima nokuzivocavoca umzimba isikhashana. Kepha akuzona kuphela izizathu.
Ukudla okuphezulu kukolweni, ummbila noma okuphuma kungadala igesi eyeqile. Mayelana nalokhu, kufanele kuthiwe amakati ayizilwane ezidla inyama, futhi uhlelo lwakho lokugaya ukudla alukwazi ukugaya lokhu kudla kahle. Futhi, uma benikezwa ubisi noma imikhiqizo yobisi, bangagcina futhi bedlula negesi. Futhi, ngasendleleni, kufanele ugweme ukusondela kudoti, ngoba ungadla ukudla okungafanele futhi uzizwe ungalungile. Kufanele futhi ukuthi uyihlikihle nsuku zonke, ngaphandle kwalokho ubuzoba sengozini yokuthi yakheke izinwele zamabhola, futhi ngenxa yalokho, ungaba negesi.
I-Los izimuncagazi emathunjini futhi i izifo zamathumbu zingaba futhi imbangela yekati elinale nkinga.
Izimpawu zegesi emakati
I-99% yegesi yamathumbu ayinaphunga, ngakho-ke ukwazi ukuthi ikati lethu linezinkinga zokugaya ukudla akulula ngaso sonke isikhathi. Kepha ungakhathazeki, Nalu uhlu lwezimpawu ezivame kakhulu:
Imisindo emgodini wamathumbu
Amakhambi asekhaya egesi emakati
Uma ugesi wekati lakho usuyinkinga, futhi ikakhulukazi uma usola ukuthi unesifo, kufanele muse kudokotela wezilwane ukuze uhlole. Kepha ekhaya ungenza nezinto eziningi, njengokulandelayo:
Gwema ukunikeza ubisi
Ubisi lwenkomo lune-lactose, okuwushukela amakati angakwazi ukugaya ngoba awukhiqizi i-enzyme edingekayo, i-lactase. Kufanele ugweme ukunikeza ubisi neminye imikhiqizo yobisi yemvelaphi yezilwane, ngaphandle kwalabo abangenayo i-lactose.
Mnike ukudla okungekho fiber kanye namabele
Iningi lokudla kwekati line-fiber eningi nokusanhlamvu, okuthi yize kuyimithombo yamaprotheni, lezi zilwane azikwazi ukugaya kahle. Ukuvimbela ikati lakho ekutholeni igesi, kunconywa ukuthi umnikeze okuphakelayo okunothe ngamaprotheni ezilwane nabampofu ezinhlamvwini nasezikhiqizweni.
Izindlela eziningi zokwelapha igesi emakati
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, sizokutshela ngamanye amakhambi akulungele nokuthi wazi ... ngale ndlela uzokwazi ukuthi ungasiza kanjani ikati lakho lingabulawa yigesi (ngoba lingaba buhlungu impela kwezinye izimo ).
Ngakolunye uhlangothi, kuwumqondo omuhle ukubhala phansi ukuthi ikati lakho lidlani kungakapheli amahora angama-24 ngenhloso yokukwazi ukulandela kahle futhi ngaleyo ndlela uthole ukuthi yikuphi ukudla okungadala la magesi.
Ngaphezu kwalokho, ukuze usize ikati lakho ukuqeda la magesi, kuwumqondo omuhle ukuthi ubheke okulandelayo:
Shintsha indlela odla ngayo njalo iye kweye-fiber encane futhi babe nokudla okugayeka kalula. Udokotela wezilwane wakho angancoma okungcono kakhulu ku-feline yakho.
Yondla ikati lakho ukudla okuncane kepha kaningi emini.
Uma unekati elingaphezu kwelilodwa ekhaya, lapho-ke kuzofanele ubondle ngokwehlukana ukubenza bangalwi ngokudla.
Vimbela ikati lakho ekudleni ukudla okonakele (ngokwesibonelo, lowo osemgqonyeni kadoti).
Kufanele uqiniseke ukuthi ikati lakho lokuzivocavoca njalo.
Uma ucabanga ukuthi amagesi anzima kakhulu ku-feline yakho, lapho-ke kuzofanele ukhulume nodokotela wezilwane wakho ukukweluleka ngomuthi ofanele amakati futhi lokho kungakusiza ekukhipheni igesi kangcono.
Kunezinye izixazululo zezinkinga zegesi emakati, isibonelo:
Izithako ze-enzyme ye-Pancreatic
Ungalokothi unikeze ikati lakho noma imuphi umuthi wegesi noma isixazululo ngaphandle kokuqala ukuxoxa ngalo nodokotela wezilwane wakho., noma ngabe ucabanga ukuthi ngamakhambi emvelo futhi lokho ngeke kukulimaze. Uchwepheshe kuzodingeka ahlole izinto eziningana ezibalulekile njengokufuya, ubudala noma isisindo sesilwane sakho.
Ingabe inkinga yezempilo?
Kubanikazi abaningi bekati abanegesi, bakhathazeka kakhulu ngoba bacabanga ukuthi igesi ecasulayo ingaba yinkinga enkulu yempilo. Empeleni, ukushayelwa igesi okuzenzekelayo akudingeki kube yinto embi, kepha lapho iba ngokweqile ungadinga ukunakekelwa ngudokotela ngoba iba yinkinga enkulu kakhulu kunalokho obekucatshangwa ekuqaleni. Ezinye zezinkinga okungenzeka ukuthi ubhekene nazo yilezi.
Isifo sokuvuvukala kwamathumbu
Izimuncagazi (ulwazi oluthe xaxa)
Kunoma ikuphi, uma ucabanga ukuthi ikati lakho kungenzeka ukuthi liphethwe noma yisiphi isifo, kungaba esesikhulunywe ngenhla noma abanye, kubaluleke kakhulu ukuthi uye kudokotela wezilwane wenze izivivinyo ezifanele. Ngale ndlela, uzokwazi ukwazi kahle ukuthi kwenzakalani kwikati lakho futhi ngaleyo ndlela uthole ukwelashwa okulifanele.
Uzoya nini kudokotela wezilwane?
Njengoba sikutshelile ngenhla, kubalulekile ukuya kudokotela wezilwane noma nini lapho ucabanga ukuthi ikati lakho linolunye uhlobo lwesifo, kepha noma kunjalo, kubalulekile ukubona uchwepheshe uma kwenzeka kukhona amagesi nezinye zalezi zimpawu, njengoba kungakhombisa inkinga enkulu yempilo:
Unobuhlungu esiswini lapho umthinta
Akazange enze isifo sohudo
Unegazi esitulweni sakho
Ekugcineni, futhi njengesilinganiso sokuvikela, kubaluleke kakhulu ukuthi unake lapho isilwane sakho sikuthola khona ukudla. Isibonelo, ekhaya, njalo umboze imfucumfucu kadoti futhi ungavumeli isilwane sakho sizulazule noma siye emathafeni omakhelwane, futhi ungasivumeli sizulazule ezindaweni lapho kugcinwa khona udoti.
Futhi, uma isilwane sakho sidla indle (kokubili esakhe nesezinye izilwane) ngoba sinokuntuleka kokudla okunomsoco ekudleni kwaso, kuzodingeka ulungise futhi ukhulume nodokotela wezilwane ngalokho okwenzekayo.
Igesi emakati ingaba yinkinga engakhululekile, kepha ngalezi zindlela uzokwazi ukuzixazulula.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Izifo » Amagesi emakati: izimbangela nezixazululo
ULissette ivonne castillo zambrano kusho
Ikati lami linesisu esigcwele amagesi kodwa alidli futhi linomzimba omncane futhi lihle phansi engingamnika lona ukuqumba ngoba kuzwakala njengesigubhu
Phendula uLissette ivonne castillo zambrano
Ngiyaxolisa ukuthi ikati lakho libi, kepha angikwazi ukukusiza ngoba angiyena udokotela wezilwane.
Ngincoma ukuthi uyihambise kochwepheshe.
Ikati lami linezinsuku eziyi-10 ubudala, unina walilahla, ngiyalikhulisa, kepha lonke ubisi luvuvukala isisu salo futhi lune-colic negesi eningi, yini engingayenza?
Ngincoma ukuthi umyise kudokotela wezilwane (angiyena).
Nawe ungaba nezikelemu. Kule minyaka yobudala basengozini enkulu.
Ungakuthola kanjani ukuzethemba kwekati?